Mpanao gazety Rosiana noterena hametra-pialàna noho ny fitsikerana ny fampielezan-kevitra mpomba an’i Potinina tao amin’ny Instagram · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Jona 2018 5:45 GMT
Polisy Rosiana zandriny avy any Volgograd, Rosia, nihira hira fiderana ho an'ny filoha Rosiana Vladimir Potinina. Pikantsary avy amin'ny Runet Echo. Loharano: YouTube.
Ny 24 May 2018, noterena hametra-pialana ilay mpitati-baovao Alexandra Terikova noho ny famoahana lahatsary Instagram ahitana ireo ankizy kely mpianatra mihira ho an'ny filoha Rosiana Vladimir Potinina ary avy eo nanatontosa resadresaka momba izany tamin'ny fantsom-pahitalavitra tsy miankina iray.
Nandefa lahatsary misy ny zanany vavy sy ankizy hafa ao amin'ny sekolin-jaza miara-miredona ny hira “Dadatoa Vova, miaraka aminao izahay!” i Terikova, izay miara-miasa amin'ny N1, tambajotra fahitalavitra madinika ao an-toerana ao Nizhnevartovsk any Siberia andrefana.
Dadatoa Vova, miaraka aminao izahay. Ao amin'ny garabola misy anay ihany koa ankehitriny. Tsy dia tiako loatra ny momba ireo mpibaiko mitarika an'i Alisa zanako amin'ny ady maharitra. #unclevovawearewithyou #staples
Tenirohy maneso ny kabary fanaon'i Vladimir Potinina isan-taona ho an'ny parlemanta Rosiana tamin'ny taona 2012 ny #staples(fototsakafo) (# скрепы), izay nitaraina momba ny tsy fisian'ny “agrafy ara-panahy” mihazona ny firaisan'ny firenena eo amin'ny fiarahamonina Rosiana. Mitanisa ny tononkiran'ny hira (Vova, fanafohezana ny Vladimir) ihany koa izy :
Eto ny taonjato faha-iraika amby roapolo, leo ady ny planeta,
Leo fanjakazakana maneratany ny mponina eto amin'ny planeta,
Tsy misy ny firaisankina ao amin'ny Vondrona Eoropeana, mijaly anaty fahoriana ny Afovoany Atsinanana
Ary robaina fahefana ny filoha iray manerana ny ranomasimbe.
Tanindrazantsika ny ranomasina avaratra, mandrapahatonga any amin'ny sisintany atsimo,
Avy amin'ireo nosy Kuril mankany amin'iny torapasika Baltika.
Maniry izahay mba hiaina amim-pilaminana ny Tany, fa raha ny lehibenay
No manombe baiko hiady amin'ny ady farany, miaraka aminao izahay, Dadatoa Vova!
Ary inona no havelan'ny indray mihira amiko,
Raha manao tsirambina ny fiambenana isika ka hamoy firenena
Ny tena namantsika mahatoky dia ny tafika sy ny tafika an-dranomasina,
Ny fahatsiarovana ny finamanana sy ny kintana menan'ny dadabe.
Tsy hitolo-batana manoloana ny Samurai izahay,
Hiaro ny renivohitr'i Amber [Kaliningrad, andrefana indrindra any Rosia] amin'ny [fanolorana ny] ainay izahay,
Hiaro an'i Sevastopol sy Krimea ho an'ny taranaka ho avy izahay
Ary hamerina an'i Alaska ho ao amin'ny tanindrazana nisy azy.
Tamin'ny Novambra lasa teo no nivoahan'ny hira voalohany ho lahatsarin-kira notarihin'i Anna Kuvychko, mpikamban'ny Duma (antenimieram-pirenena ao amin'ny parlemanta Rosiana) mpanao lalàna miaraka amin'ny antokon'ny fitondrana, Rosia Tafaray. Nahazo “tiako” 17.000 sy “tsy tiako”40.000 tao amin'ny YouTube ny lahatsary, izay nanangona mpianatra avy amin'ny sekolin-jaza eo an-toerana ao Volgograd – Stalingrad teo aloha, (toeran'ny ady mavesatra indrindra sy nahafatesana olona be indrindra tamin'ny Ady Lehibe Faharoa)- ary niteraka adihevitra goavana tamin'ny aterineto noho ny feo fitiavan-tanindrazana tafahoatra sy ny fampiasana ankizy ho amin'ny fampielezan-kevitra ara-miaramila:
Tamin'ny 6 Jona, niresadresaka tamin'ny TV Rain (Dozhd), fantsom-pahitalavitra miahy tena, i Terikova, izay nanazavany fa nanohana ny fampisehoan'ireo ankizy ny sasany tamin'ireo ray aman-drenin'ny ankizy mianatra ao amin'ny akanin-jaza ary nitehaka ho an'ireo ankizy efa-taona sy dimy taona satria nihira am-pitiavana ny tononkira izy ireo. Naneho ny fanoherany tamin'ny mpampianatra i Terikova, saingy nesorina ny fitarainany, hoy izy.
Ny 8 Jona, nampahafantatra azy “ankapobatana” ny sefo an'asa an'i Terikova, ny lehibe mpanatanteraka ao amin'ny tambajotra iasany fa “amin'ny fananana faniriana ara-politika tahaka ny anao, any amin'ny fantsona nanaovanao antsafa no toeranao”, hoy i Terikova tamin'ny antsafa manaraka tao amin'ny TV Rain.
Namoaka ny sarin'ny fametraham-pialàny izy avy eo, ary nilaza fa izy no mpitati-baovao voalohany ao amin'ny Nizhnevartovsk voaroaka noho ny fomba fijeriny manivaka.
Zava-misy mahazatra ao Rosia ireo mpanao gazety very asa noho ny fanehoan-kevitra mitsikera na fanatrehana famoriam-bahoaka ataon'ny mpanohitra. Tamin'ny taona 2012, voaroaka tao amin'ny fantsona NTV i Pavel Lobkov, izay miasa ao amin'ny TV rain amin'izao fotoana. Tamin'ny taona 2015, voaroaka tao amin'izany NTV izany ihany koa i Konstantin Goldenzweig noho ny fanaovana antsafa tao amin'ny fantsona fahitalavitra Alemà iray nilazany ny “fomba fiteny mivantambatana mampalaza” an'i Vladimir Potinina